« Toko tapaka, vilany mitongilana »… | NewsMada
« Toko tapaka, vilany mitongilana »…
Raha tsy diso ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetr’andro, hanao azy indray ny andro ratsy sy ny ora-mikija, manomboka anio, hatramin’ny faran’ny herinandro io, noho ny afitsok’i … Fransico. Ilay faritra andro ratsy, hita any amin’ny 500 km, atsinanan’i Brickaville, ary hoe mizotra manaraka ny faritra afovoany andrefan’ny Nosy. Voalaza fa mety hampanahy indray ny tondradrano noho ny mety ho fahabetsahan’ny rotsak’orana. Raharaha ihany satria “ny an-tratra tsy lavo”, hoy ny fitenenana, ka “antsoy koa Rainilahibe”. Ny takaitra navelan’ireny andro ratsy saiky nanerana ny Nosy teo aloha ireny aza, mbola afaka akory dia izao efa manangasanga sy manambana izao indray koa ny hafa. Fahoriana miampy fahoriana e!
Raha ny marina anefa, tsy tokony hahagaga sy hahataitra izany. Fantatra mantsy fa mbola ao anatin’ny fotoan’ny rivodoza, indrindra isika aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina, amin’izao vanim-potoana izao. Tena zava-dehibe ny fahavononana sy ny fiomanana. Fahavononana amin’ny fiatrehana izay mety hitranga rehetra amin’ny fotoana sy ny toerana rehetra. Ny fiomanana rahateo koa, araka ny fitenenana, no endriky ny fahaiza-mitantana.
Mba hihena, farafaharatsiny izay mety ho voka-dratsin’ny fandalovan’ireny rivodoza sy andro ratsy ireny, raha mahay mandray ny andraikiny ny tsirairay, ireo manampahefana isan-tokony any amin’ny faritra any, eo ambany fitarihan’ny aty amin’ny ambaratonga foibe.
Heverina koa, etsy andanin’izay, fa ampy nisintonana lesona sy nahazoana traikefa ny tranga rehetra niseho teo aloha. “Toko tapaka, vilany mitongilana”, hoy ny fitenenana, ka “izay tsy mety, harenina” e. Marina loatra izany. Tsy amin’ny toe-javatra tahaka izao ihany fa amin’ny lafim-piainana, lafim-pitantanana maro…
Federation Internationale de Boxe Française Savate: miandry ny tolo-kevitry ny federasiona isanisany 25/05/2020
Mitaraina ny mpanoratra: iharan’ny soloky miharihary ny boky 25/05/2020